Ukuqinisekisa Ubudala e-UK | I-Foundation Foundation
The Law Ukuqinisekisa Ubudala e-UK
Izithombe zobulili ezingcolile yizokuzijabulisa kwabantu abadala. Kunemikhawulo yokulayiseniswa kukahulumeni ekufinyeleleni kwayo kwezingane empilweni yangempela ngendlela efanayo nokunye ukugembula, ukuthenga utshwala, ugwayi noma imimese. Lezi zisekelwe kwizizathu zezempilo ezisekelwe ebufakazini. Izithombe zobulili ezingcolile ezitholakala kuyi-Internet zitholakala ngokukhululekile ezinganeni. Kuze kube manje uHulumeni akazange abe nenqubo yokuphoqelela imingcele ezinganeni ezingcolile zobulili ezingcolile. Noma kunjalo, lokhu kuzoshintsha ngokusungulwa kohlelo oluqinile lokuqinisekiswa kweminyaka.
Ngo-17 Julayi 2017 UNgqongqoshe weDivansi we-UK Matt Hancock wasayina i-oda lokuqala Umthamo Wezomnotho We-2017 okuyinto eyazuza iRoyal Assent ngo-Ephreli. Ungabona ingxenye yesenzo se-Pornography e-Inthanethi lapha.
Njengomphumela umphumela usuqale ukuletha inqubo yokuqinisekisa iminyaka yobudala yokufinyelela izithombe zobulili ezingcolile ezise-intanethi. Lokhu kulindeleke ukuthi kube khona ngo-Ephreli 2019, okubaluleke kakhulu emsebenzini kaHulumeni ukuze wenze UK indawo ephephile emhlabeni ukuze izingane zikwazi ukuxhumeka kwi-intanethi.
I-Reward Foundation yabamba iqhaza ekubonisaneni komphakathi ku-2016 futhi yayisebenza ekuphoqeleleni amaphalamende ukwenza lo mthetho uhambisane nenhloso.
Ukusebenza iminyaka yobudala kuyosebenza kanjani?
Ngaphansi koMthetho iBhodi yaseBrithani yeBalayidi yokuBala (BBFC) izokwenziwa i-Regulator futhi izonikezwa amandla okwenza abanikezeli bezinsizakalo ze-intanethi bavimbele ukufinyelela kumasayithi e-pornography angabeki izinyathelo zokuqinisekisa iminyaka yobudala ekukhuseleni izingane.
Imfuneko yokuvimba amawebhusayithi izosebenza kuwo wonke amasayithi e-UK nakwamanye amazwe. Lapho amawebhusayithi avela e-EU inqubo izohambisana nemithetho yezwe evela kumvelaphi.
Ngokufingqa, lokho uHulumeni akwenzile ukuvikela izingane ekufinyeleleni kokuqukethwe okulimazayo kwezocansi kuyi:
Uhulumeni ubelokhu ekhuluma nabanikeli bezithombe zobulili ezingcolile mayelana nokuvikela izingane. I-akhawunti ephezulu ye-50 akhawunti ye-70% yabasebenzisi. Abaningi, kufaka phakathi indawo enkulu kakhulu yamahhala ngesabelo semakethe, bavumelane nohulumeni ukuthi basebenzise ukuqinisekiswa kweminyaka.
Izingosi ezingcolile zobulili ezingcolile ziyizinsizakalo zezindawo ezikhokhelwayo. Abahlinzeki bemisebenzi yokukhokha (isib. I-VISA, i-Mastercard) bavumile, uma kudingeka, ukuhoxisa amasevisi okuthengiselana kusuka kumawebhusayithi angavumelani.
Amawebhusayithi adinga amaseva ukuwabamba, abakhangisi ukuwasekela, kanye nengqalasizinda ukuyixhuma. Ngendlela yamazwe ngamazwe futhi engahambisani nomthetho lapho i-Inthanethi isebenzisana khona neHulumeni yase-UK ayikwazi ukuphoqelela izinsizakalo ezisekelayo ukuba zithathwe, kepha umlawuli uzofuna ukuthola ukubambisana embonini.
Kulawo masayithi angahambisani nokuqinisekiswa kwe-Age sizovumela umlawuli ukuthi asebenzise ukuvinjelwa kwe-ISP futhi athathe amasayithi phansi.